हामी नेपालीले अंग्रेजी नमिसाई शुद्ध नेपालीमा बोल्दा कसो होला ? डा. हेम राज ढकाल (बिद्या वारिधि) – Naya Pusta
हामी नेपालीले अंग्रेजी नमिसाई शुद्ध नेपालीमा बोल्दा कसो होला ? डा. हेम राज ढकाल (बिद्या वारिधि)
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुन ११, शुक्रबार १४:२७ [post-views]
अमेरिका । ‘यो प्रोब्लम अलि कम्प्लिकेटेड छ के त्यसैले भनेको।’ केही समय पहिले संयुक्त राज्य अमेरिका को वाशिंटन डि. सी. नजिकैको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको बेला सुनेको वाक्य हो यो। उक्त कार्यक्रमका प्राय: सबै वक्ताहरुले यहि अंग्रेजी-नेपाली मिश्रित शैलीमा आफ्नो मन्तब्य राख्नुभो।
यसो दाँया, बायाँ, अगाडि पछाडि, चारै तिर हेरें कोहि बिदेशीहरु सहभागी छन् कि भनेर तर देखिन। बरु, ४-५ जना नेपाली बृद्ध आमा बुवाहरु एक अर्कोलाई हेरी राख्नुभएको थियो र मसिनो स्वरमा आफ्नै कुराकानीमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको हाउभाउ बाट लाग्थ्यो कि उक्त वक्ता को मीठो भाषण बाट धेरै टाढाको संसारको यात्रा मा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु।
मलाई कता कता असहज र नमज्जा लाग्यो। मैले बिनम्र अनुरोध गरेर भने कि, हेर्नुस, यहाँ कुनै बिदेशी छैनन्, सबै नेपाली नै छौँ, हामीले बोल्दा सकभर अंग्रेजी शब्द नघुसाउदा ठिक होला, यदि अंग्रेजी शब्द घुसाउनै परे अलि कम गरे कसो होला?
त्यति मध्ये, कतिले मलाई आश्चर्य को भावले हेर्नु भो, कति ले केहि वास्ता गर्नुभएन। मात्र एकजनाले अलिक अफ्टेरो मानेर कन्दै भन्नुन्भो, ‘कुरो त चाहिने ठिकै हो बट अलि गारो गारो पो छ त ठ्याकै तेसो गर्न…राइट?’
मेरो मनको पोलाई कम भएन। त्यहाँ धेरै बस्न मनले मानेन। कार्यक्रमको औपचारिक समापन अघि नै मैले घरको बाटो नापें। मनभरी केहि प्रश्नहरु श्रावण महिनाको च्याउ सरि उम्रिए। सोचें, अनि आफैले आफैलाई सोधें, के हामी नेपालीहरु नेपालीमा बोल्न सक्दैनौ ?
वा बोल्न चाहदैनौ? के हामी बोल्दा, सबै नेपाली नै भएको ठाउँ मा सबैले बुझ्ने साझा भाषा बोल्न सक्दैनौं? के हामी दर्शकदिर्घाको चाहनालाई ख्याल गर्न सक्दैनौ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरुले किचिदै घर पुगेको पत्तै भएन तर अझैं अनुत्तरित भएको भान भै रह्यो।
त्यहि पुरानो मित्रको प्रशंग गम्दै बसी राखेको थिएँ। नेपालको समाचार हेर्ने इक्षा जाग्यो। समाचारमा देखें एकजना ठुलै दलका सर्बोच्च नेताजी अति बिकट ठाउँ मा भाषण गर्दै रहेछन। यसो ध्यान दिएर सुन्दा, ति नेताजीको पनि त्यहि नेपाली-अंग्रेजी मिसावट गर्ने बानि थाहा पाउन धेरै समय लागेन।
मैले त बल्ल बल्ल बुझे क्यारे, तर थाहा छैन त्यहाँका जनताहरु जस्ले बुझ्नै पर्ने थियो, उहाँहरुले सबैले कुरा प्रष्ट बुझ्नु भयो या भएन? देशको नायक को वक्तृत्व कला देखेर पनि साएद चित्त बुझेन। चलचित्र क्षेत्रका एकजना ख्याति प्राप्त नायक को अन्तर्वार्ता मा हेरें यु ट्युबमा। उहाँ को भाषा शैली पनि करिब करिब उस्तै थियो…अब मलाई शंका रहेन हामी नेपाली को साझा पहिचान कम्तिमा यो कुरामा समान रहेछ भन्ने कुरा मा।